Faransiiska: Emmanuel Macron ayaa Isniinta la hadlaya 20H - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Faransiiska: Emmanuel Macron wuxuu Isniinta ku hadlaa 20h
Waqtiga ayaa yimid doorashooyin iyo ogeysiisyo loogu talagalay Emmanuel Macron. Madaxwaynaha ayaa la hadlay Isniintii 15 April at 20h00 telefishanka ka dib markii dood weyn oo qaran ah oo lagu abaabulay dhibaatada "qalab jilicsan" oo soconaya muddo shan bilood ah. Waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalaha weriyeyaasha shir jaraa'id oo Arbacada ah.
Emmanuel Macron wuxuu qabtay ballanqaadkiisa inuu soo saaro gabagabadii tartankii qaran ee badhtamaha April. Waxa uu la hadli doonaa fiidnimadii isniinta inta uu ku jiro hadalka inta uu ku dhawaaqi doono mashaariicda mudnaanta leh »Iyo« talaabooyin la taaban karo oo keli ah oo looga jawaabayo welwelka lagu soo koobay qaabka doodda qaran ee weyn ".
Madaxweynuhu wuxuu doortay inuu mudnaanta siinayo soo bandhigid adag oo toos ah loogu talagalay Faransiiska. Laakiin wuxuu sidoo kale go'aamiyay, waana fikrad cusub oo laga soo bilaabo doorashadiisii, si uu u abaabulo shir saxaafadeed, ugu horeyntii quinquennium, si looga jawaabo dhammaan su'aalaha si faahfaahsan. Hawlgalka isgaarsiinta ayaa si aad ah loo qabsadey.
Isbedelka habka isbedelka software. Sababtoo ah ka bixitaanka tartankan weyni waa cadad muhiim u ah Madaxa Gobolka oo raba in uu galo ficil cusub oo quinquennium ah oo soo rogo bogga "jaalaha yaryar".
Isbedelka uu filayo in uu si ballaaran u abaabulo xukuumadda oo lagu qabtay Elysee habeeyntii ogeysiisyada. Markan Emmanuel Macron wuxuu isku deyayaa inuu wax iska dhaafo, sababtoo ah wuxuu ogyahay inuusan xaq u lahayn qaladka.
Raadinta qashinka ah
Dhanka kale, wax walwal maaha go'aanka Madaxa Dowlada. Dabcan, waxaa jira jaangooyooyin la sheegay in ay u badan tahay in ay u dhigmaan filashooyinka la soo bandhigay inta lagu jiro doodda weyn. Tallaabooyin ku saabsan awoodda wax iibsiga ee dadka hawlgabka ah, qoysaska kelidood ah, tallaabooyinka lagu hagaajinayo hawlaha dimuqraadiga ama kor u qaadista xayawaanka, iyo in ka badan dhammaan tallaabooyinka canshuurta.
Laakiin su'aashan kama dambays ah, ma jiro wax la hubo sida uu Madaxweynuhu u go'aamin doono iyo sida caddaaladda canshuuraha loo tarjumi doono xaqiiqda. Canshuur dhimista fasalka dhexe sida ra'iisal wasaaraha looga dalbaday? Horumarinta canshuurta ee kordhay si loo iftiimiyo kooxaha ugu hooseeya sida ay rabaan qaar ka mid ah Xildhibaanada? Qof walba waxa uu joogey maalmaha ugu dambeeya ee uu soo jeediyay, isaga oo badinaya faraqa u dhexeeya garabka midig iyo garabka bidixda.
War saxaafadeedka Axadda, khilaafyada culus lama saadaalin karin, sidoo kale cadaadiska Emmanuel Macron. Marine Le Pen, Baroin François, Laurent Berger, Nicolas Hulot, iyo kuwa kale, waxay muujiyeen walaacooda.
Dhaqdhaqaaqa "jaallaha jaalaha ah" wuxuu ka dhashay kororka canshuurta kaarboon, ugudhaca shidaalka: korodhka la joojiyay tan iyo markii Emmanuel Macron uusan ku laaban, ugu yaraan muddo gaaban, kadib 2020.
Farsamooyinka labaad ee "lampets" "jaalaha yaryar", sida laga soo xigtay ra'yiururinta ra'yi badan oo Faransiis ah: dib u soo celinta canshuurta hantida. Emmanuel Macron ayaa marar dhaar ku dhaariyay inuusan waligiis ku hogamin doonin, laakiin raadadka yar ee kordhinta canshuurta hantida hantida ayaa miiska saaran.
Waddo kale oo macquul ah ayaa ah in la geliyo horumarin dheeri ah oo lagu sameeyo xisaabinta canshuurta dakhliga, iyada oo ku darsaneysa qalab dheeri ah oo loogu talagalay qoysaska ugu khatarta badan.
Dawladdu waxay joojisay in ay indho-indhaynayso sicir-bararka: tan iyo bishii Jannaayo, lacagta hawlgabka ayaa kor u kacay qiimaha adeegatada. Dib-u-dhejinta waxay noqoneysaa mid daraasad, laakiin kaliya hawlgabka yar yar.
Isha laga soo xigtay: http://www.rfi.fr/france/20190414-france-attente-annonces-presidential-apres-grand-debat
Israel: "Bibi" ayaa mar kale ku celisey muddada shanaad ee Benyamin Natanyahou - JeuneAfrique.com